Ungakwazi ukugibela ibhayisikili ngenkathi udakiwe? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Ibhayisikili elidakiwe - kanjani ukubhekana
Ibhayisikili elidakiwe - kanjani ukubhekana
Ungakwazi ukugibela ibhayisikili ngenkathi udakiwe?
Ukuhamba ngebhayisikilingaphansi kwethonya lotshwala akukaze kube umqondo omuhle. Kuthinta izikhathi zokuphendula, kubangele ukuvimbela ukuthi kunyamalale futhicannikelawenaengakwazi ukulawula aibhayisikili. Ucwaningo lwakamuva lukhombisile lokhoukudakwaabagibeli bamabhayisikili basengozini ephindwe kayishumiukubaulimale kuukuhamba ngebhayisikiliingozi kunabagibeli bamabhayisikili abanengqondo.
Ukuphindisela kabusha kungenye yezinto ezilula ongazenza, kepha kunomthelela omkhulu ekusebenzeni kwakho. Futhi uma uhambo lwakho lude, kubaluleke kakhulu ukufaka uphethiloli. Ukuhamba ngamamayela, noma umdlalo omkhulu omkhulu obulungiselela wona isikhathi eside, noma ukugibela nje okude okude kwehlobo, sizokukhombisa ukuthi uzodlani nokuthi uzokudla nini, kodwa ngaphambi kokuba sikwenze, qiniseka ukuthi ubhalisela i-GCN uma ungakakwenzi, bese uchofoza izithonjana zebell zezaziso nokusekela isiteshi. (I-Dramatic Music) - Into yokuqala okufanele uyazi ngokufaka uphethiloli ohambweni olude ukuthi i-refueling yakho ayiqali uma uyithola ngebhayisikili lakho.
Ngenkathi ukufaka i-carbs kuyinto enhle, uzofuna ukugcwalisa lawo ma-carbohydrate akhonzwayo, kepha ukudla kabili lokho obekuvame ukukudla kuzokushiya uzizwe ukhululekile futhi uvilapha ngosuku olulandelayo. Zama ukudla ama-carbs athe xaxa kunalokho obejwayelekile; ufuna ibhulakufesi le-GI elinenhliziyo ephansi, elinamafutha aphansi. Ngakho-ke okuthile okufana nephalishi, i-Bircher muesli noma i-oats yasebusuku kungaba kuhle njengoba kungama-carbohydrate ane-GI ephansi, okusho ukuthi amandla akhishwa kancane.
Ngakho-ke uzozizwa izinzuzo isikhathi eside. Futhi ufuna ukugwema ukudla okunamafutha njengoba kubambezela ukumuncwa kwama-carbohydrate adingeka kakhulu ohlelweni lwakho. Ukuthosa okujulile kungenzeka kungabi inketho enhle kakhulu ngaphambi kohambo olukhulu. (slow techno beat) - Izinto ezilula kuqala.
Kepha ekugcineni, isu lokuphuza olikhethayo lizoya ngezimo oshayela kuzo. - Uma kushisa impela, gxila ekubeni nama-electrolyte kuziphuzo zakho ukuze ubuyisele amaminerali abalulekile owalahlekelayo ngokujuluka, futhi uma kungenzeka, hlela okungenani iphuzu elilodwa ohambweni lwakho lokukhipha amabhodlela akho Ithiphu eyi-pro futhi ukuthatha ithebhulethi ye-electrolyte kanye nesikhwama seziphuzo ezixubekile nawe ephaketheni lakho noma esikhwameni sesihlalo, uma ugcwalisa amabhodlela akho ehlobo ngithanda ukuba namanzi nama-electrolyte emabhodleleni ami ukuze ngiqiniseke ukuthi ngidlula izithukuthuku ezigcwalisa amaminerali alahlekile. Kepha ebusika ngithanda ukugcwalisa amabhodlela ngomxube we-carbohydrate futhi ngisebenzise uhlobo oluthile lomkhiqizo okhethekile, isikhwama se-carbohydrate mix, empeleni ungathola inani eliphakeme lama-carbohydrate umzimba wakho ongawamunca ngehora.
Isizathu salokhu ukuthi banenhlanganisela elungile kashukela ezokuvumela ukuthi uthole inani eliphakeme lama-carbohydrate ngehora, elingaba likhulu ukukusiza ukuthi uphehle. (Umculo weTechno) - Thatha ukudla kwangempela lapho uhamba khona lapho ugibela amabhayisikili amade. Ngakho-ke lokhu kungaba ngama-flapjacks, amakhekhe erayisi, ubhanana, noma mhlawumbe amasangweji amancane.
Futhi uma ufuna ukuhlala ugcwele amanzi ngesitayela, kungani kufanele? Ungayi esitolo se-GCN uyothola amabhodlela amanzi e-GCN Camelback. Futhi uma ungathanda ukubona enye indlela yokwenza i-athikili, chofoza lapha.
Ingabe kusemthethweni ukujikeleza i-UK udakiwe?
Ingabeukuhamba ngebhayisikilininiukudakwa okungekho emthethweni? Yebo. Kuyicala ukugibela i-ibhayisikiliemgwaqeni noma kwenye indawo yomphakathi lapho ingakulungele ukugibela ngenxaisiphuzonoma izidakamizwa.
Abagibeli bamabhayisikili bangacasula njengamanje. Ngiqonde ukuthi, akuyona nje izingubo ezimnandi noma imizila yamabhayisikili, kubonakala sengathi bacabanga ukuthi bangaphezulu komthetho lapho begibela eceleni komgwaqo, benendawo yokuphelelwa yithemba lapho bevukile, futhi musa ngisho ukungenza ngiwele amalambu abomvu ngigxumele, Ngiqonde ukuthi iyingozi impela, angithi, abantu abaningi bacabanga kanjalo futhi abezindaba bakholelwa ngokuqinisekile ukuthi kunabagibeli bamabhayisikili abalalela imithetho yethrafikhi njalo, bancibilikisa indlela eseceleni futhi bangasebenzisi isigqoko sokuzivikela kumaselula abo, ngakho-ke kunabagibeli bamabhayisikili hhayi umshwalense ukuthi bangashayisa imoto yakho bangakushayisa. Ngithole amabhayisikili ukuthi uthola ulaka ngokwengeziwe eminyakeni edlule alungile ngokuphelele.
inhliziyo amaprotheni enempilo
Abagibeli bamabhayisikili bacabanga ukuthi bangaphezu komthetho futhi ngabe kunendaba yini, ngakho-ke ake siqale ngezisekelo lapho sikhuluma ngabagibeli bamabhayisikili, sisho ukuthini ngalelo lungelo? lokhu noma ngisho ukuthi ngiqonde ukuthi abanye abantu babukeka njengabantu abajwayelekile kodwa empeleni akekho umgibeli webhayisikili kunabantu nje abagibela ibhayisikili futhi ababonwa njenge-ac yklist iyingxenye yenkolelo eyinkinga yabantu abagibela ibhayisikili, awubonwa njengo umhlukumezi noma oqeqeshwe eMpumalanga, kepha kunale nkolelo-mbono yokuba umgibeli wamabhayisikili, yize kunjalo abantu abaningi abagibela ibhayisikili basebenzisa ezinye izindlela zokuhamba, ngakho-ke abagibeli bamabhayisikili abahlukile ngempela kwabanye futhi ngenkathi Izibalo zilinganiselwe Abukho ubufakazi ukuthi abantu bephula umthetho kaningi emabhayisikili kunanoma yisiphi esinye isikhathi. Iningi labagibeli bamabhayisikili bathe lokhu bakwenze ngokwengxenye ukukhulisa ukuphepha kwabantu abathi kwesinye isikhathi baphathe amalambu okufunda ngoba besaba, uma kwenzeka okuthile kubo ngaphambili, bebengaba nokuxhumana okuseduze nemoto iTrry to Get Them You kungenzeka futhi ukuthi ube semgwaqeni ngenxa yalesi sizathu, kepha ikakhulukazi ukuphepha futhi kuyazigcina Ngakho-ke yebo, abanye abagibeli bamabhayisikili baphula umthetho kodwa noma ngabe benza kanjalo kuyingozi kakhulu. Umthelela walokhu kuziphatha abantu abakhala ngakho ubucayi uma ubheka izibalo ozibukayo, ingozi yangempela yokulimala okholwa ukuthi iyingozi kuwo wonke umuntu wase-UK cishe abantu abayi-1,700 ngonyaka engibabulala emigwaqweni nokuthi kanjani iningi lalabo abashayiswa ngamabhayisikili imvamisa phakathi kuka-zero namabili ababona abazakhi ngokwabo njengabagibeli bamabhayisikili ngoba ubungozi obusemkhatsini onabo buqikelela kakhulu noma bekukho futhi lokho kuyacasula kuphambene ngokuphelele nalokho okutholayo ezimotweni ngoba abantu ezimotweni ezinamabhande esihlalo, ama-airbags, amakheji we-bestel, bazizwa bephephe kakhulu ukuthi bathambekele ekuthukeni izinsizakusebenza ngohlobo lobugebengu okungenzeka ukuthi babulala abantu noma abalingiswa abakhulu baneminyaka engu-13 ubudala entshonalanga ye-midlands ngicabanga ukuthi i unikeze ukudlula kwamahhala ilambu elibomvu ukweqa abagibeli bamabhayisikili futhi omunye wabo ubengeke athole lutho ngokubaxosha bonke, okugcina kusho ukuthi konke lokhu kusho ukwephula umthetho wamabhayisikili kulungile bengizothi cha, akunakuba njalo an kukhala, kungaba? kungasabisa futhi, kepha mancane amathuba okuthi kube yingozi enkulu kwabanye njengoba kungenabungozi kangako ukuthi kungani kungebona bonke abantu abakhuluma ngebhayisikili eliyingozi, kungenzeka ukuthi kungenxa yokuthi abantu abasebhayisikili bayabavusa noma kucace bha kodwa ngeke uqaphele umshayeli owenza i-30 ina 2001 ocingweni lwesondo yepdu wayazi ukuthi le ngxenye iza ukuthi yini ngabashayeli esingabakhumbula futhi bangaba ngamabhayisikili uma besezimotweni baphula nomthetho futhi uma bekwenza kube yingozi namuhla, kuzofa abantu abahlanu emigwaqeni yethu kanti abangu-63 bazolimala ekushintsheni kwempilo futhi ezimweni eziningi lapho abashayeli ababanga lokhu kushayisana besecaleni elidale lezo zingxabano Ukuphazamiseka kweselula okujwayelekile kungenzeka kubhekele inani elikhulu konke ukushayisana manje izinto esiyikho zibheke ngokweqile Umkhawulo wejubane akuyona nje umkhawulo oyibonayo kuyinjongo ukufeza okunye ukuziphatha okuphuza ngokwemvelo izidakamizwa zokushayela futhi ngeshwa wena k manje ukusetshenziswa kwezidakamizwa emotweni kuyanda uma ushayisa imoto ngejubane elingu-30 mph, inamandla afanayo, amandla afanayo okubhubhisa njengesiqhumane esincane osithengile yingakho njengomphakathi kufanele senze umzamo ukuze ungene kubantu ngempela uma uhamba ngale moto, kufanele uyithathe ngaleyo ndlela, uma kubhekwa ukuthi ngo-2016 babangu-448 abahamba ngezinyawo ababulewe emigwaqeni yase-UK bacabanga ukuthi abezindaba bayingxenye enkulu ngoba lapho sizwa ngesigameko lapho kuba khona F Iphutha Lomgibeli Wabagibeli yinto eyenzeka kakhulu, engavamile Kuyisihloko esikhulu kakhulu Kugcwele amaphepha Kugcwele izindaba emsakazweni futhi wonke umuntu uyazi Ukuthi umgibeli webhayisikili wenze okuthile okungalungile futhi kuyinhlekelele uma lokho kwenzeka, kodwa ngeshwa abantu abaningi Sifele emigwaqeni yethu nsuku zonke ngenxa yezenzo nokunganaki komuntu oseshayeleni lwemoto futhi mayelana nayo ngeke nje kubikwe ukuthi kube nabaningi balaba kule minyaka eyishumi edlule noma kunjalo, inani labantu ababulewe noma ababucayi ulimale e-UK ro izikhangiso cishe zicishe zayingxenye, kodwa ingxenye enkulu yaleyo nzuzo yezokuphepha izwakale kubantu ezimotweni nakumabhayisikili abacishe babe yingozi kakhulu.
Uma sifuna ukwenza imigwaqo yethu iphephe kakhulu, kufanele sigudluze izingxoxo zethu kanye nokugxila kwabezindaba kude nebhayisikili nokuya ekushayeleni, futhi akungenxa yokuthi abashayeli bangabantu ababi kakhulu, yimicabango nje efaka izinganekwane namanga akusizile ukwakheka kwemitholampilo intando nokuhleleka komphakathi ngakho-ke ngicabanga ukuthi sidinga ukukhuluma ngendlela yabantu, sithathe okuthe xaxa kancane futhi samukele abanye abantu futhi kungadingeka ukuthi sibuyele emuva siphinde siphume ezimpilweni zethu zonke futhi siqonde ukuthi iningi labo, ngabantu nje abadinga ukuza futhi sihloniphane kakhudlwana Ngiyabonga ngokubuka Sicela uthande futhi ubhalise Shiya imibono yakho ngezansi Futhi uma uthanda esikwenzayo, chofoza lapha ukuze ubone ukusekelwa kwembuzi
Ingabe kuyingozi ukuhamba ngebhayisikili lapho udakiwe?
'Akukho emthethweni nganoma yimuphi umuntu ukugibela iibhayisikiliemgwaqeni omkhulungenkathingaphansi kwethonya lesiphuzo, 'kufundeka kanjaloAmaCaliforniaIkhodi Yezimoto; izephulamthetho zibhekene nezinhlawulo zama- $ 250.
Uyini umkhawulo wotshwala wokuhamba ngebhayisikili?
Ngokungafani nokushayela uphuze, akukho okuphezuluumkhawulo wotshwalangokudakwaukuhamba ngebhayisikili, futhi yize amaphoyisa engacela ukuhlolwa komoya, uMnu Farrell uyakuchaza lokhoabagibeli bamabhayisikilikungakwenqaba lokhu.04.26.2019
(umculo othule) - Kunezindlela eziningi ezahlukahlukene zangemva kokuhamba. Futhi uma ngikhuluma iqiniso, okwami ​​yikho okungcono kakhulu. Sawubona opie. - Yo, uma ngikhuluma iqiniso, angiqiniseki kangako.
Ngakho-ke kule ndatshana ku, sizokutshela okufanele ukwenze nokungafanele ukwenze ngenqubo ephelele ngemuva kohambo. (I-logo iyachuma) (umculo ophilayo) - O mfowethu, lokho bekuwukugibela okunzima. Futhi ngilambe ngokuphelele ngakho-ke ngingakwazi uku-oda isinkwa esifishane sezigidi? , ucezu lwe-caramel, enye yalezo zimfushane futhi mhlawumbe iscone? - Asikukhuthazi lokho.
Esikuncomayo, nokho, ukuthi uqale inqubo yakho yokutakula ngesiphuzo sokululama futhi mhlawumbe nesitsha sezithelo ezifakwe imifino phakathi nemizuzu yokuqala engama-20 ubuyile lapho ugibele khona ukuze ukwazi ukuqala le nqubo futhi uqine. (umculo odlalayo) Kuhle ukuthi alale lapho futhi kuhle ukuthi ululame ngokushesha, kepha hhayi ngegiya lakho lebhayisikili hhayi lapho ungadlanga kahle. Ngakho-ke yisikhathi sokuthi ngipheke isidlo sasemini kanti ngenkathi kupheka isidlo sasemini ngiyahamba ngiyolula. (Snoring) (umculo othulile) Ngenkathi uHank elele obala e-cafe, nginqume ukubuyela ekhaya ngizoqala ukululama ngigingqika amagwebu futhi ngizelule, okuyinto enhle kakhulu ngokuthola obunye babo buthakathaka engibusebenzise emva kokuzivocavoca emisipheni yemilenze yami namhlanje ekuseni, kodwa futhi kuhle ukukhulisa ukuguquguquka kwami ​​okusiza isikhundla sami kubhayisikili.
Nginesigamu sehora ngaphambi kokuba ngiyidinge ukuze ngiyipheke, okuyisikhathi esikahle. (umculo othulile) Owu James, James, James, uzofunda nini? Ayikho indlela ongaqala ngayo ukululama ize yenziwe yonke imisebenzi yakho yosuku futhi ngiyazi ukuthi ibhayisikili lakho lingcole njengebhayisikili lami. Ngakho-ke kungcono uvuke maduze uphume lapha uzihlikihle.
Ngemuva kwakho konke, uzwile isisho esithi ibhayisikili elihlanzekile liyibhayisikili elisheshayo. (umculo othule) - Yebo, ikhefi lingikhiphile, ngakho-ke ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokugoduka. (umculo omnandi) Ngakwesokudla, ngikuhlehlisa isikhathi esanele, ngicabanga ukuthi futhi kufanele ngigeze, ubani, ngomile impela, futhi lokho kuzokwanela.
Ubhiya ubukeka ubukeka buheha futhi yebo, ngizizwa sengathi ngibo kwenye akuyona indlela engcono yokufaka uphethiloli ngemuva kokuhamba kanzima; esikhundleni salokho, ukudla okuhle okunomsoco nokulinganisela okuhle kwamaprotheni nama-carbohydrate neminye imifino enempilo kuzosiza umzimba wakho ukuba ululame kangcono kakhulu. Ngemuva kwakho konke, uyilokho okudlayo. Namuhla ngizizwa ngifuna ukwenza okuthile ngamaqanda nelayisi. - Ngiqonde ukuthi, mhlawumbe hhayi ukunambitheka, kepha isiphuzo se-electrolyte sizokwenza okuningi ukuvuselela kabusha umzimba ngemuva kokuzivocavoca okunzima.
Bese kuqala ubeke izinyawo zakho phezulu, yini leyo? - Kulungile, hlala uphumule - Ushintshile kusukela ezinsukwini zakudala. Babechwepheshe kakhulu.
Futhi okunye ngotshwala ukuthi kungakhubaza ukululama kwakho kuze kufike kuma-25%. Angikwazi ukudalula okungako. Into eyodwa engasiza ukululama kwakho ngicabanga ukuthi udinga ukuphakamisa imilenze yakho ngaphezu kwenhliziyo yakho.
Futhi kungaba njalo? Akuyona isayensi ngemuva kwalokhu, kepha kuzwakala njengokuqabula imisipha yakho ngokuvumela lonke igazi ukuba libuyele emzimbeni wakho. Thatha isithongwana uma ukwazi. (umculo othule) Akukho okuhlula umzuzu wamandla we-10 wamandla.
Kuhle ukukhishwa kwehomoni ukusiza ukukhulisa ukutakula kwakho. Uma uyijabulele le ndatshana futhi uthole ukuthi amathiphu wethu awusizo, sinikeze izithupha ezinkulu futhi ukuthola amanye amathiphu wokutakula, sicela uwafake ebhokisini lamazwana elingezansi. UHank omdala ompofu, wayekwazi ukuhamba, angithi? Ukuze uthole ama-athikili wokuqeqesha amaningi chofoza lapha.
Ungalahlekelwa yiLayisense yakho yokushayela ibhayisikili udakiwe?
Ilayisense yakho yokushayelaayikwazi ukugunyazwa.I-Amaphoyisangabeukuhlola okuningiiumgibeli webhayisikili kanyeumawezwaiumgibeli webhayisikili wayeyingoziukuyena kanye / noma abanyebonazingambopha nomaiumgibeli webhayisikilingabexwayiswa noma ubhekane nenhlawulo.07.12.2016
Kufanele ugibele ibhayisikili udakiwe?
Ngenkathiamabhayisikilikungenzeka ingabi usongo olufanayo nezimoto,ibhayisikili elidakiwekungaba nemiphumela emibi njengokubanga ukulinyazwa kwempahla, ukuzilimaza wena, nokulimaza abanye.Ukugibelaeyakhoibhayisikilingemuvawenabekulokhu kunjaloukuphuza kufaneleungalokothi uthathwe kalula.
Ngabe abagibeli bamabhayisikili baphuza ubhiya?
Awudingi amashumi eminyaka yocwaningo ukukutshela lokhoabagibeli bamabhayisikili(nabagijimi nabadlali bombhoxo nabanye abantu abasebenza kanzima) bavame ukujabulela ukuzivocavoca ngemuva kokuzivocavocaubhiyanoma amabili noma kahle, ngaphezulu.
Ungalahlekelwa yilayisense yakho yokushayela udakiwe?
Ilayisense yakho yokushayelaayikwazi ukugunyazwa.I-Amaphoyisangabeukuhlola okuningiumgibeli webhayisikilifuthiumawezwaumgibeli webhayisikilikwabaukuingozi kuye kanye / noma kwabanyebonazingambopha nomaumgibeli webhayisikili ubengathandauqaphele noma ubusoukukulungile.
Cannoma kunjaloukhefuzelelapho ugibela ibhayisikili? Ngamafuphi impendulo ithi cha. Imijikelezo, njengakuma 'push bikes' ayihlanganiswa yimithetho enjalo.
Ungakwazi ukugibela ibhayisikili uma uvinjelwe ukushayela?
TOukushayela ukuvinjelwaihlanganisa zonke izimoto kanjalowenaawukwazi ukushayela imoto, isithuthuthu noma i-moped ngesikhathi sakho sokungafanele.Uma uudinga ukuhamba, cabanga ukuthenga iphasi lebhasi noma ikhadi lokuhamba ngesitimela.Ungasefuthi sebenzisa i-ukushayela ukuvinjelwanjengezaba zokuucabanga ukuthi ubani wenaOkuningi.